Namuhla, umqondo wegama elithi "umklamo we efulethini," ngeshwa, kusho hhayi kuphela umhlobiso for the holiday.
Long gone izinsuku lapho siyisinqumo esinzima kunazo zonke ku-yokufuna ifulethi ngangithambekele ekutholeni ngokushesha inketho efanelekayo. Manje emakethe ukwakhiwa ethuthuka ezigqoke: umsebenzi wokwakha uqalisiwe izinkampani nomasipala, ngenkuthalo akha izindlu osomabhizinisi yangasese.
Thola ukukhetha ukuthenga noma exchange esikhathini sethu ulula, kwakuzoba imali. Okuningi nzima ukusungula ubuqiniso kuthengiselana, uhlole ukuze ubone ukuthi ingabe amadokhumenti angelona iqiniso futhi isakhiwo - zibalwa ngokungemthetho.
Abameli ekubhekaneni ingcebo, waxwayisa: ngaphambi ukugqoka ubuqiniso idili lokugcina, hlola ngokucophelela ukuthi umklamo ihlangabezana ezindlini zonke izinkambiso nemithetho. Kuphela ngale ndlela uzobe okuqinisekisiwe ilungelo hlala ezweni izindlu uthenge, futhi ilungelo lokusebenzisa.
Ngakho, indlela engcono kakhulu ukufeza yokubhalisa kwemibhalo ukuze efulethini?
Okokuqala, hlola idumela umdayisi. Lokhu kungenziwa ngokusebenzisa ejensi ingcebo noma usebenzise "izwi lomlomo". Uma umdayisi awasolisi, usukulungele ukubhekana.
Hlola ukuphelela amaphepha adingekayo kanye ubuqiniso idokhumenti ngayinye. Hlola (kungenzeka ngosizo ochwepheshe abazimele), njengoba kahle imibhalo namaculo futhi kuqoqwe.
Ukuklama efulethini kwakungokomthetho yini, hlola ngokusebenzisa isevisi efanele, bangaki abantu apelwe aphume endaweni ethengisa, kungakhathaliseki nezingane zakhe ezincane zibhaliswe.
Buza kukangaki efulethini kakade ithengiswe. Buza omakhelwane noma abasebenzi ngezidingo, kwaba ukuthi sasiyini isizathu sokushintsha njalo abanikazi.
Qiniseka ukuthi ukuklanywa efulethini ngokomthetho, ukuthi umlando wayo akukho "amnyama." Okuwukuphela kwendlela ungakwazi ukuqinisekisa ubuqiniso kanye semthethweni kuthengiselana.
Buza ukuthi yini isizathu ukudayiswa amafulethi, indlela umuntu onekhono ngemvume imibhalo of ukudayiswa.
Uma ithengiswe flat, washiya ngentando, qiniseka ukuqinisekisa ubuqiniso kanye ubuqiniso idokhumenti. Lokhu kuzosiza ukugwema ukubonakala ezingalindelekile wezindlalifa esisemthethweni, ngubani kwabanye lingekho isizathu lapho ebanjwa design flat.
Qiniseka ukubuza ukuthi ikhona yini kule uthenge izindlu ezinjenge. Uma kwakunjalo, semthethweni yayo kumele njalo kuqinisekiswa isitifiketi kusukela BTI.
efulethini design - akuyona kuphela iqoqo imibhalo, kodwa futhi umdayisi mutual umthengi.
Ungahambi for idili wedwa, ningathwali eningi. Indlela ephumelela kunazo nephephile sibalo - ukudluliswa lemali ku-akhawunti. Ungasebenzisa futhi iseli ebhange.
Kunoma ikuphi, le yasebhange nemizana futhi indlela yokukhokha kumele akhethwe kusengaphambili futhi uhlele izinhlangothi ezimbili: umthengisi umthengi.
Uma ukuthengwa nokudayiswa izobanjelwa ngokuvumelana nemithetho, ngayo yonke iminyaka ezalandela, inkinga enkulu nabanikazi ngeke wamaphepha, futhi umhlobiso kaNcibijane efulethini.
Ukuchitshiyelwa kweRejista Yombuso Ohlanganisiwe Wezinkampani Zomthetho: ukuhleleka kanye nemali yombuso
Ukuze ezinye izimpawu, kanye ukuhlonza indlela yokuphatha tachycardia ventricular?
Yethenisi wokuqala emhlabeni: sohlelo engcono ithenisi abadlali zomhlaba
Indlela esiphatha ngayo conjunctivitis
Ukwelashwa Steel e-Israel - imisebenzi phesheya - Odokotela Abahlinzayo kwa-Israyeli
Ukutshala imali esikhathini esizayo, noma ekumiseni iphothifoliyo utshalomali
Liwusizo and eliphezulu quilted coverlet embhedeni: indlela yokwenza izinqumo ezinhle?
Kusukela lokho ukuba bagqoke izingubo lace omnyama?